IGit, Shopware namafolda angenalutho > UVielhuber David
IGit, Shopware namafolda angenalutho08
Uhlelo lokulawulwa kwenguqulo yefayela le-Git luncikile, luyashesha, futhi luyaphatheka. IGit ihlala iphatha izinto, okungamafayela. Amafolda enziwa kuphela uma kukhona amafayela kuwo, ngaphandle kwalokho iGit ngeke iwarekhode. Lokhu kunemiphumela engemihle kweminye imisebenzi. Isibonelo, uhlelo lwesitolo lakwaShopware luthembele ekulandeleni ngokuqinile isakhiwo sefolda ukuze lusebenze.
Uma ngabe ifolda eyodwa ilahlekile (ngokwesibonelo kufolda "yenqolobane" noma "kumathempulethi"), i-Shopware iyayivuma insiza. Isibonelo, ifayela lokungena lakamuva kakhulu kufolda "yezingodo" liyakhishwa:
Ukuxazulula inkinga, mane ubeke ifayela elilandelayo le-php kufolda yezimpande yokugcina lapho amafolda angenalutho asekhona bese eyiqhuba:
Ifayela lidlula kulo lonke isakhiwo sefolda liphindelela bese lifaka ifayili elingenalutho "ifolda engenalutho" kumafolda angenalutho. Ngemuva kokuthi ucindezele ushintsho futhi waludonsela endaweni enenkinga, isakhiwo sefolda sesiphelele futhi ne-Shopware isebenza ngaphandle kwezinkinga.